माओवादीका एजेन्डामा अरु दलले रजाइँ गरेका छन् : किरणप्रसाद भट्टचन | eAdarsha.com
माओवादीका एजेन्डामा अरु दलले रजाइँ गरेका छन् : किरणप्रसाद भट्टचन
किरणप्रसाद भट्टचन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खुला सदस्य पदका उम्मेदवार हुन् । माओवादी १० नम्बर वडा कमिटीको अध्यक्षसमेत रहेका भट्टचन राजनीतिका अतिरिक्त समाजसेवाका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । बाबु बाजेको थातथलो मुस्ताङ भए पनि उनी पोखरा रामबजारमा नै जन्मे र त्यहीं हुर्किए । उनी स्थानीय दुची टोल विकास संस्था, खानेपानी उपभोक्ता समिति, बाटो निर्माण समिति र थकाली राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कास्कीको अध्यक्ष हुन् । यसैगरी थकाली सेवा समितिको केन्द्रीय उपमहासचिव र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखरा महानगरपालिका उपशाखा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि उनले निर्वाह गरिरहेका छन् । समाजसेवाका लागि विगत र वर्तमानमा आफूले गरेका काम तथा राजनीतिक सक्रियताका कारण आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको बताउने भट्टचनसँग आदर्श समाज प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईंका मुख्य चुनावी एजेन्डाहरु के–कस्ता रहेका छन्?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पनि देशको विकास निर्माणमा केही गर्नुपर्छ, सुशासन र शान्ति, सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ अनि आफ्नो वडाको विकासको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ मेरो उम्मेदवारी आएको हो । म विजयी भएपछि वडा नम्बर १० लाई सफल वडाको रुपमा अगाडि बढाउन हामी हरहमेसा लागिरहने छौं । यस चुनावमा विजयी भएमा बुद्धचोक र अमरसिंह चोकमा आकासे पुल बनाउने छौं । केन्द्र, प्रदेश, महानगरपालिका र वडामा समन्वय गरेर हामी यो काम गर्नेछौं । यसैगरी खानेपानीको व्यवस्था, बालमैत्री वातावरण, घरघरमै वृद्धभत्ता पुर्‍याउने योजना, स्तरीय र गुणस्तरीय पिच बाटोहरुको निर्माण पनि हाम्रा योजनाहरु छन् । ढल, खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनको उचित व्यवस्था तथा जनगुनासो सुन्न गुनासोपेटिका राख्ने लगायत कामलाई पनि हामीले ध्यान दिनेछौं । शिशु स्याहार केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र बजारलार्ई व्यवस्थित गर्ने, सेती नहर र पोखरा रंगशालाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना र सिसी क्यामेरा जडान, औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर र प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन, रामघाटामा आधुनिक दाहसंस्कार स्थल, सुकुमवासीलाई लालपूर्जा वितरण, अशक्त, विपन्न र असहायलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयलाई पनि हामीले घोषणा पत्रमा समेटेका छौं । यी एजेन्डा लागु गर्न र वडाको विकासका लागि जसरी हुन्छ कटिबद्ध भएर म लाग्नेछु ।
५ दलीय गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने कुरा थियो तर यहाँ दलहरु एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो?
केन्द्रीयस्तरमा ५ दलको सरसल्लाहअनुसार गठबन्धनको कुरा आएको हो र हामीले पनि यहाँ गठबन्धन हुन्छ भन्ने आशा गरेका थियौं । तर कुरा के भने हाम्रो पार्टी पछि जन्मिएको भए पनि हामी कमजोर छैन भन्ने हिसाबले पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । निकै पहिलाबाट कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरु जरा गाडेर बसेका छन्, त्यस्ता दलसँग चुनाव लड्नु गाह्रो त निश्चय नै छ तर हामी सशक्त रुपमा अगाडि बढ्नेछौं । नयाँ दललाई व्यवस्थापन गर्न र राजनीति क्षेत्रमा आउनलाई निकै गाह्रो हुन्छ अनि हामी जस्ता सयौं पार्टी पनि रहेका छन् । तर पनि मैले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दिएँ । शून्य मत ल्याउनेदेखि हजारौं मत ल्याउने पनि आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न तामझामका साथ पुगेका थिए । हामी त राष्ट्रियस्तरमा तेस्रो हैसियत भएको दल हो, नोमिनेसन नगर्ने कुरै भएन । २०६४ सालमा माओवादी पहिलो दल भएकै हो तर आन्तरिक खिचातानीले अहिले तेस्रोमा खुम्चिएका छौं । तर गर्व गर्न लायक के छ भने देशमा अहिले जुन एजेन्डाहरु स्थापित भएका छन् ती सबै माओवादीकै कारण आएका हुन् ।
पार्टी कमजोर होला म कमजोर छैन । अरु पार्टीमा विश्वास छैन किनभने एजेन्डा कमजोर छन्
वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के छ?
जीतको आधार के छ भने लडाइँको मैदानमा गएपछि हार जीत स्वाभाविक कुरा हो । निर्वाचन पनि एक हिसाबले लडाइँ नै हो । त्यसैले जीत हार भन्ने कुरा वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि नै थाहा हुन्छ । मेरो सशक्त पक्ष के रहेको छ भने म कयौं सामाजिक तथा राजनीतिक संघसंस्थामा आबद्ध छु । मैले इमानदार भएर जनसेवा गर्दै आएको छु । मलाई धेरैको समर्थन छ । त्यसैले बरु पार्टी कमजोर होला म कमजोर छैन । अरु पार्टीले तपाईं मेरो पार्टीमा आउनुस् जिताउने जिम्मा हाम्रो भन्छन् । तर मलाई अरु पार्टीमा विश्वास छैन । अरु पार्टीका एजेन्डा कमजोर छन् । उनीहरु सयौं वर्षदेखि जरा गाडेर बसेका कारण र पुरानो पार्टी भएका कारण चर्चामा होलान् तर जनप्रिय पार्टी माओवादी नै हो । त्यसकारण मतदाताले भोट दिनुहुनेछ, मलाई जिताउनु हुनेछ । त्यसकारण म मतदातालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने माओवादीको एजेन्डा देश विकास हो । नत्र माओवादीलाई के रहर थियो र, हाम्रा ठूला नेताहरु विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओ तथा विभिन्न निकायमा जागिर खाएर वा व्यापार गरेर लाखौं कमाउन सक्थे तर त्यसो नगरी राजनेता बनेर देश सेवा गर्न तत्पर हुनुहुन्छ । मैले पनि जनतालाई वडा १० मा सीमित रहेर भन्नु पर्दा हामी विजय भएपछि यस वडामा विकासको लहर ल्याउने छौं । त्यसैले जनताले पत्याएर मलाई जिताएको खण्डमा यो वडालाई नमुना बनाउने छु ।
तपाईं राजनीतिमा आउने वातावरण कसरी बन्यो, यसबारे केही बताइदिनुस् न ।
राजनीतिमा म खासै पुरानो मानिस त होइन, धेरै वर्ष विदेश नै बसें । २०५२ सालमा जब नेपालमा माओावदीले जनआन्दोलन सुरु गर्‍यो, म त्यसमा पनि लडेको मानिस होइन । खासमा यी आन्दोलनमा म इन्भल्भ भइन, यद्यपि कुरा के भने म युद्धमा नलडेको भए पनि त्यो क्षणलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अन्तर्वार्ता र विभिन्न क्रियाकलाप बुझेर म अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हुँ । माओवादी के रैछ त भन्ने विषय पनि मैले नजिकबाट मसिनो गरी केलाएको छु । सुरुमा मैले के पत्ता लगाएँ भने माओावदीले किन युद्ध लड्यो भन्ने बुझ्दा सयौं वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो युद्ध सुरु भयो । किनभने राजतन्त्रले आफ्नो व्यक्तिगत लाभमात्र हेर्ने । राजतन्त्रमा राजाको छोरा नै राजा हुनुपर्ने । प्रधानमन्त्री त त्यो बेला वरियतामा ५१ नम्बरमा आउने । प्रमजस्तो जननिर्वाचित व्यक्ति त ५१ मा आउने, जुन राजाको मितको छोराभन्दा पनि तल्लो हो । त्यसो भएको हुनाले जननिर्वाचित व्यक्तिले पो शासन चलाउने हो भन्ने हिसाबले म माओवादीमा आबद्ध भएको हुँ । राजाको इशाराले चल्ने शासनभन्दा जननिर्वाचितले चलाउने शासनलाई अगाडि बढाउन म यो पार्टीमा लागें । म माओवादीले चुनाव जितिसकेपछि यस पार्टीमा संलग्न भएको पनि होइन, पहिला नै २०५७/०५८ सालतिरबाट नै लागेको हुँ । हाम्रो पार्टीमा पनि टुटफुटको अवस्था देखियो तर संयम भएर र एउटै पार्टीको झण्डामुनि बसेर देशको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले म अगाडि बढिरहेको छु ।
कुनै समय पहिलो दल बनेको माओवादी तेस्रो स्थानमा छ, पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
एउटा उखान छ, युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छन् । हाम्रो दललाई १७ हजार मानिस मार्‍यो भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ, त्यसकारण म के भन्छु भने विश्वयुद्धमा पनि त लाखौं मानिस मर्न पुगे । त्यसबेला पनि यस्तै नकारात्मक कुराहरु फैलिएको थियो होला । दोस्रो विश्वयुद्ध र इराक तथा इरानको युद्धमा पनि धेरै मानिस मरे । अहिले रसिया र युक्रेनको युद्ध जारी छ, हजारौं मानिस मरेका छन् । विकास निर्माणको क्रममा र लडाइँमा मानिस त मर्छन् नै । देश र जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउने क्रममा झडपमा सेना मरे, व्यक्ति मरे, सुराकी मरे । हामी तिनलाई सहिदको नाम दिन चाहन्छौं । हाम्रो आन्दोलनले देशमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अघि माओवादीका एजेन्डाको कुरा गर्दै थिएँ, प्रत्येक वडामा एउटा महिला सदस्य र एउटा दलित सदस्य हुनै पर्ने अनि मेयर र उपमेयरमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था त माओवादीका कारण भएको हो । एजेन्डा माओवादीको स्थापित भएको छ तर हाम्रो पहुँच जनतासँग कम भएका कारण पहिलो पार्टी अहिले हुन सकेको छैन । वास्तवमा माओवादीका एजेन्डामा अरु दलले रजाइँ गरेका छन् । हाम्रा एजेन्डा लागु भएका कारण हामीले यसलाई हाम्रो जीतको रुपमा नै लिएका छौं ।